Abatshalizimali - Shineon Technology Co., Ltd.
I-GSR Ventures iyisikhwama semali yebhizinisi esitshala kakhulu ezinkampanini zobuchwepheshe besigaba sokuqala nokukhula ezinemisebenzi emikhulu eChina. I-GSR njengamanje inezigidi ezingaba ngu- $ 1 billion ngaphansi kokuphathwa, Izindawo zayo ezibhekiwe ngokuyinhloko zifaka i-semiconductor, i-Intanethi, i-wireless, imidiya entsha nobuchwepheshe obuluhlaza.
INorthern Light Venture Capital (i-NLVC) iyinkampani ehamba phambili yokugxila eChina egxile emathubeni okuqala nokukhula. I-NLVC ilawula cishe i-US $ 1 billion kumali ezibophezele ngezimali ze-3 US $ nezimali ze-3 RMB. Izinkampani zayo zephothifoliyo zithatha i-TMT, Clean Technology, Healthcare, Advanced Production, Consumer njalonjalo.
IDG Capital Partners igxile kakhulu ekutshaleni imali kumaphrojekthi ahlobene ne-VC & PE ahlobene neChina. Sigxila kakhulu ezinkampanini ezihola phambili kumikhiqizo yabathengi, izinsizakalo zama-franchise, i-inthanethi nohlelo olungenantambo, imidiya emisha, imfundo, ukunakekelwa kwezempilo, amandla amasha, nemikhakha yokukhiqiza esezingeni eliphakeme. Sitshala imali kuzo zonke izigaba zempilo yenkampani kusuka esigabeni sokuqala kuya ku-pre-IPO. Ukutshalwa kwemali kwethu kusuka ku-US $ 1M kuya ku-US $ 100M.
IMayfield Found ingenye yenkampani ephezulu yokutshala imali emhlabeni wonke, iMayfield ine- $ 2.7 billion ngaphansi kokuphathwa, nangaphezu kweminyaka engama-42 yomlando. Itshale imali ezinkampanini ezingaphezu kwama-500, okuholele kuma-IPOs angaphezu kwekhulu kanye nokuhlanganiswa nokutholwa okungaphezulu kwekhulu. Imikhakha yayo ebalulekile yokutshala imali ifaka i-Enterprise, Consumer, Energy Tech, Telecom kanye ne-Semiconductors.